Injeniera - Pejy 5 - Geofumadas
Amin'ny volana Novambra, ny seminera AutoCAD Map 3D 2009 dia hatao any amin'ny tanàna samihafa any Espana miaraka amin'ny vahaolana ho an'ny faritra Topografika, rano, fidiovana ary herinaratra. Inona no antenaina amin'ny Topografia: ny fitaovana hamoronana, hanaovana sary an-tsaina ary handinihana ireo maodely topografika, ary koa ho an'ny famolavolana sy ny fizotrany, haseho ...
Hanolotra Seminera Geo any Espaina i Bentley
Ny biraon'ny Bentley Systems any Espana dia manolotra: Seminera GEOSPATIAL Bentley faha-5, FAMPANDROSOANA NY GIS HO AN'NY INFRASTRUCTURUR Ity dia hatao any Madrid sy Barcelona amin'ny 19 sy 2008 Novambra XNUMX. Ity hetsika manerantany ity dia hampivondrona ireo manampahaizana avy amin'ny tambajotra elektrika, lasantsy, rano sy fifandraisan-davitra ary koa orinasan-tsolika ...
Bentley dia mandeha amin'ny tena fahazavana
Tany am-piandohan'ity taona ity i Bentley dia nanambara ny fahazoana HevaComp, mpamorona rindrambaiko CAD Express anglisy manokana momba ny Electrical Engineering. Miaraka amin'izany, i Heva dia apetraka amin'ny toe-javatra mora azo kokoa noho ny tamin'ny fotoana nahombiazany tamin'ny fametrahana azy tany Angletera, Etazonia ary firenena eropeana sasany, ho fitaovana foana ...
AutoDesk dia manolotra fanasana amin'ny fampisehoana izay vaovao amin'ny sivily 3D ao amin'ny kinova 2009, na amin'ny vahaolana ho an'ny drafitra an-tanàn-dehibe sy ny fananganana ary ny asa sivily. Ity fampisehoana ity dia ho amin'ny Internet, ary maimaim-poana mandritra ny adiny iray ... ary ny tsara indrindra, amin'ny Espaniola !!! Noho izany dia tsy maintsy misafidy ny Internet ianao izay ...
Autodesk sivily 3D
AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS, Engineering
Fikajiana ny rafitra an-tserasera, ao anatin'izany ny sary
Area de Cálculo dia tranonkala novolavolain'i Area de Cálculo, Diseño y Construcción S. de RL monina ao Madrid. Araka ny anarany, dia toerana hanaovana fanaovana kajy amin'ny famolavolana rafitra an-tserasera. Andao jerena ohatra iray: Te-hamolavola zoro voaroaka aho; Mankany amin'ilay faritra "Fandaharana kajy ...
Engineering, fanavaozana, Video
Tetezana mandeha amin'ny arofanina miaraka amin'ny rafitra ADN
Ny ADN dia ekena ho toy ny mampiavaka ny fiainana, ary miorina amin'io fotokevitra io, ny Bridge Bridge Marina Bay dia manaitra antsika amin'ny endriny tsy manam-paharoa hatreto ary ny géometrika izay mamela ny fitoviana amin'ny mandeha amin'ny takelaka ADN. Amin'ny drafitra dia manana endrika miolaka izy, miaraka amin'ny ...
Andro faly Happy
Tamin'ny alàlan'ny AutoDesk Labs no nahitako fa androany ny andro hatramin'ny nankalazana ny taona 1988 ho fanomezam-boninahitra ny litera PI, fanehoana an'io isa halaintsika io rehefa mianatra isika. Izahay dia miresaka ny isa (3.14159 ...), izay amin'ny daty dia 14 martsa amin'ny 1:59, 7 segondra, 254 arivo metatra ...
Ity dia lisitry ny vokatra AutoDesk sy Bentley Systems, manandrana mahita fitoviana misy eo amin'izy ireo, na dia sarotra aza izany satria ny fampiharana sasany dia manana fironana mitovy, fa ny fomba fanaony dia tsy mitovy foana. Talohan'ny nahitanay ny sasany tamin'ny fivoaran'ny AutoCAD sy ny Microstation. Raha fintinina dia azontsika atao izao manaraka izao ny fehin-kevitra manaraka: Sehatra ...
AutoCAD Map Autodesk Bentley Systems sivily 3D dwg
AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS, Engineering, Microstation-Bentley
Fampiasa Google Earth amin'ny Epanet
Epanet dia fampiharana tena ilaina amin'ny famakafakana hydraulic, ahafahanao manamboatra tamba-jotra amin'ny fantsona ary mianatra ny famakafakana tambajotra izay mitaky kajy maro, ary koa manaova simia sy famakafakana ny kalitaon'ny rano mifototra amin'ny halaviran'ny famoahana (sy izay rehetra ranon-javatra). Ny zavatra tsara indrindra amin'ity rafitra ity dia ny ...
AutoCAD sy ny 25 taona
AutoCAD feno 25 taona, toy ny zazavavy matotra na lehilahy mivoaka amin'ny mari-pahaizana master. Avy amin'ny Blog Blog dia mandray lesona enina ianarantsika avy amin'ny tantaran'ny AutoCAD: AutoCAD 1.0 Aza miasa miaraka amin'ireo tsara, tsara kokoa amin'ireo malaza indrindra, nanapa-kevitra ny AutoCAD fa hivoatra amin'ny tahan'ny DOS AutoCAD R9 Raha misy ny mifaninana ary ...
Noho ny fangatahan'ny mpianatra teo aloha izay tsy nahavita ny fianarany dia namaly fanontaniana iray momba ny fananganana mpandeha amin'ny AutoCAD aho. Amin'ity tranga ity dia manana latabatra izahay, ao amin'ny tsanganana voalohany dia misy ny gara, amin'ny faharoa ny halavirana amin'ny metatra ary ny tsanganana fahatelo dia misy ny fitondra. Hanohy ny fananganana ny polygonal, ...
Mitovy amin'ny profil, ao amin'ny Google Maps
Hey Inona izany serivisy miorina amin'ny Googlemaps api, izay mamela anao hanisy marika amin'ny sarintany ary hijery ny mombamomba ny làlana. Tena azo ampiharina amin'ny fanadihadiana isan-karazany, fitetezana, fametrahana antena, ary tanjona hafa. Mahaliana, satria azonao atao koa ny mampandeha ny tsipika contour sy ny hafahafa ...
Ny bilaogy Ingenieria.com dia teraka
Faly be izahay mandray ny Ingenieria.com Blog, izay natomboky ny tamba-jotra Blogstica androany, manantena izahay fa ho tonga hameno ny lohahevitra izay tsy dia nisy nanararaotana tao amin'ny bilaogy Hispanika. Ao anatin'ireo andalana kasain'ity bilaogy ity ny: Fampiharana tranonkala lozisialy Architecture CAD / CAM Software Engineering sivily ...
Previous page pejy 1 ... pejy 3 pejy 4 pejy 5